UNO!™ 1.3.7331 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.7331 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ UNO!™
UNO!™ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
- Play classic UNO™ or select fromavariety of new rules to play in real-time matches
- Compete in tournaments and events to win rewards and top the leaderboards
- Partner up, play in 2v2 mode and collaborate to win
- Connect anytime, anywhere with friends from around the world
UNO အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးနည်းလမ်းသစ်အတွက်ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ကဒ်ဂိမ်း Play! ™အဆိုပါဂန္ကဒ်ဂိမ်း All-အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ, ပြိုင်ပွဲ, ကစားသည် Modes နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူသင့်မိုဘိုင်း device ကိုမှကြွလာ! သငျသညျအိမျမှာနေပဲဖြစ်ဖြစ်, သွားလာရင်းတစ်ခု UNO ဝါရင့်သို့မဟုတ်လုံးဝအသစ် UNO! ™အဆုံးစွန်ယှဉ်ပြိုင်မိသားစုဖော်ရွေဂိမ်းပါ! အဆင်သင့်။ set ။ UNO! ™
- ဂန္ UNO ™ Play သို့မဟုတ် Real-time ပွဲအတွက်ကစားရန်အသစ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအမျိုးမျိုးကနေ select လုပ်ပါ
- Partner 2v2 mode မှာကစား, ထနဲ့အနိုင်ရပူးပေါင်း
- ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသူငယ်ချင်းများနှင့်, အချိန်မရွေးချိတ်ဆက်ပါ
! UNO မှနယူး™သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးကဒ်ဂိမ်းကစားလိုသော? လျင်မြန်စွာ Play ကိုထိပုတ်ပါနဲ့ဂန္ UNO ™စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဂိမ်းအသစ်တက်ကိုစတင်ပါ။ အချိန်မရွေး Play, ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသညျကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်!
အခန်း Mode ကိုခုနှစ်တွင်, မိတ်ဆွေများဖိတ်ခေါ်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်သူအိမ်သားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို set up ။ သင်၏လက်ကိုသို့မဟုတ် "Stack" ကဲ့သို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကနေလုံးဝတဦးတည်းအရောင်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်၎င်းတို့၏လက်သို့သင်၏မိတ်ဆွေများပုံကတ်များကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ "စွန့်ပစ်အားလုံးသည်" ကဲ့သို့အသစ်သောကတ်များ Play ။ ဤသည်ကလွယ်ကူမည်သူမဆို join ဖို့အတှကျကိုအဆုံးစွန်မိသားစုဖော်ရွေမိုဘိုင်းပါတီအတွေ့အကြုံကိုပါ!
လုပ်ပြီး buddy Up ကို
2v2 mode မှာစစ်တိုက်ခြင်းငှါထမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အဖော်ရှာပါ! အခြားအဖွဲ့ကိုရိုက်နှက်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကိုသုညမှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသင်၏လက် (သို့မဟုတ်သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့) ကိုလျှော့ချကူညီပါ!
ချိတ်ဆက်ပါ, Chat, UNO ကြီးတွေ! ™
အလွယ်တကူ, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေတဲ့ပွဲစဉ်ကာလအတွင်းအခြားသူများနှင့် chat သို့မဟုတ်သင်အနိုင်ရတော့မည်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ device ကိုသို့ UNO ™ကြီးတွေ။ သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ရူ့အခြားသူတွေအပေါ်နှင့်အတူ Strategize!
real-အချိန် Galore ကိုက်ညီ
ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုလာဘ်အနိုင်ရပြိုင်ပွဲနှင့်အထူးဖြစ်ရပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်! သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရန်ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ပြပွဲ-ပယ် Top!
တောရိုင်း Go - မဟုတ်ပါ, တကယ်။
ဒါကမရရှိထားသူ-ပိတ်ပင် mode ကိုအဆုံးစွန် UNO! ™စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့အထဲ၌သွင်းထားသောအရာကို 160 ကြိမ်အထိနှစ်ခုကုန်းပတ်ကစားနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့အပေါ်အိမ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ဒါပေမယ့်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်, ဒီရိုင်းဇာတ်လမ်းထဲမှာသငျသညျကြီးတွေအနိုင်ရသို့မဟုတ်လက်ဗလာအိမ်ပြန်! သင်စိန်ခေါ်မှုတက်သည်မှန်သလော
www.letsplayuno.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရှိတဦးက site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
www.facebook.com/UNOnow: ပိုပြီး updates တွေကို Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ
UNO!™ အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
UNO!™ အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
UNO!™ အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
UNO!™ အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 11
universal-store စတိုး 371 685.4k
UNO!™ ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း UNO!™ အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.7331
ထုတ်လုပ်သူ Mattel163 Limited
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.letsplayuno.com/news/bulletin/20180201/27283_738777.html
App Name: UNO!™
File Size: 115.33MB
Release date: 2019-06-26 02:21:48
လက်မှတ် SHA1: CB:4D:DE:64:E1:FF:7E:3F:E4:19:31:73:BC:C2:07:4F:7B:17:1F:71
ထုတ်လုပ်သူ (CN): daidai
အဖွဲ့အစည်း (O): game
နယ်မြေ (L): hz
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): zj
UNO!™ APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ